TS cutter: Olee otú Bee TS Files
> Resource> Video> otú bee / Split / Kpaa TS Files
Olee otú Bee / Split / Kpaa TS Files
TS faịlụ ndọtị na ọtụtụ-eji HD ọdịnaya. Videos na nke a format ndị na-emekarị nnukwu na size. Ya mere, ị pụrụ ịdị mkpa ka bee a nnukwu-size TS video n'ime multiple nta video faịlụ, ma ọ bụ bepụ ụfọdụ na-enweghị isi na obere vidiyo nke a TS faịlụ. Lelee video nkuzi banyere otú bee / gbawara n'etiti videos mbụ.
N'eziokwu, i nwere ike ngwa ngwa na-adị mfe ịrụcha ọrụ dị ka ogologo oge i nwere ihe ndị magburu onwe TS cutter. Ebe a, Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor) (Filmroa maka Mac (Si Wondershare Video Editor for Mac)) ukwuu tụrụ aro. Ọ dị mfe iji na nwere nza video edezi atụmatụ gụnyere ịcha TS faịlụ, ọtụtụ ihe, ka na-na ikwu elu video & audio àgwà mgbe mgbe edezi na-eme.
Easy-eji TS cutter: Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor)
Mfe bee TS faịlụ n'ime akụkụ dị iche iche na-enweghị àgwà ọnwụ.
Tinye ikwu n'ụzọ, nzacha, Intro / Ebe e si nweta na nsonaazụ ụda na-eme ka TS faịlụ ọzọ anya.
Zọpụta TS faịlụ dị iche iche formats, ọkụ na-DVD ma ọ bụ ozugbo bulite online.
1. Import TS faịlụ ka a TS cutter
Na isi menu nke interface, e nwere "Import" button. Dị nnọọ pịa ya mbubata gị chọrọ TS faịlụ site na kọmputa na-ngwa a. N'oge a, ị ga-achọpụta na kwukwara TS video e depụtara na onye ọrụ album nke a TS video cutter. I nwekwara ike ozugbo ịdọrọ na dobe ya ndị Album. Tụkwasịzie TS video ị chọrọ kewaa si album ka usoro iheomume.
2. Cut TS faịlụ
Bugharịa ihe red Time egosi na ọnọdụ ị chọrọ wee pịa Scissor bọtịnụ. Ozugbo ahụ, TS faịlụ a ga-kewaa abụọ n'akụkụ. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike bee TS faịlụ n'ime ọtụtụ Obere vidiyo. A n'oge a, ị ga-mma ịzọpụta a na oru ngo site na ịpị bọtịnụ n'elu-n'akụkụ aka ekpe ma na-aga "Save dị ka" maka Archive nzube.
Mgbe ị na bee TS faịlụ n'ime mkpachị, dị nnọọ ihichapụ ndị a mkpachị ị na-achọghị. Na mgbe ahụ kpọmkwem mbupụ ndị fọdụrụ mkpachị n'ime ọhụrụ faịlụ.
3. Export ọhụrụ TS faịlụ
Mbupụ a ọhụrụ faịlụ, dị nnọọ pịa "Mepụta" button. Na mmapụta elu mmepụta window, ị nwere ike na-aga "Format" taabụ ịzọpụta gị video n'ime dị iche iche formats. Ndị ọzọ mmepụta nhọrọ na-agụnye ọkụ ka DVD, bulite on YouTube na Facebook ma ọ bụ chekwaa maka mkpanaka ngwaọrụ dakọtara formats.
Video Tutorial: Olee otú Bee / Split / Kpaa TS Videos
Olee otú Jikọọ TS Videos
Olee otú Tinye ndepụta okwu ka Video
Olee otú Resize Video Files
Olee otú Tinye Audio ka Video